Igama elithi "silinganiso" weza Russia olimini lwesiLatini futhi lisho "ukulingana". It inezincazelo eziningi emikhakheni ehlukahlukene umsebenzi womuntu, kodwa manje cabanga indima kuphela okunenjongo emkhakheni ezezimali nezomnotho. Ikakhulukazi, uzofunda ukuthi intengo silinganiso nohlobo lwemali.
Esimweni sokuqala, kuba ilingane ratio ukubaluleka izinhlobo ezahlukene imikhiqizo. Lapha ngesisekelo sekhaya, lapho amanani kwezimpahla asethwe by isimiso kwefrakshini, okuyinto nsé izinga lenzuzo. Ngaphezu kwalokho, leli nani qiniseka ukuqhubeka, uma ibhalansi the Dynamics babe ngeziphambeko abangelutho noma zihlala zinjalo. Umkhosi yalezi nemingcele yisimo ezinkulu kwezomnotho sokuchuma olinganiselayo futhi ngokulingana, ukuhlinzeka degree efanayo kahle ngokuya nenzuzo. Ngaphezu kwalokho, ukwazi kahle ukuthi silinganiso, bonke abalingani emakethe bakholwe ukuqaliswa izimo zokukhiqiza kabusha ukunwetshwa.
Lwemali silinganiso - lihlela isilinganiso phakathi kwama zezimali ezimbili ezahlukene, okuyinto lihlelwe ngokuqinile ngumthetho. Equilibrium siyisisekelo yamazwe ngamazwe exchange rate ukuphambuka ibhalansi ohlosiwe. Kuze 1978, kuphethwa okuqukethwe igolide. Kwake kwaba khona umhlangano njalo iqhaza ezikhethekile Monetary Fund, ngesisekelo ukubala ngazimemezela okuthiwa amalungelo umdvwebo. Lolu hlobo oluthile okulingana, okuyinto ekhiqizwa usebenzisa kuphela IMF namabhange central yonkana isimo ukuze ukhokhe phakathi kohulumeni.
Ngaphezu kwalokho, Wemali Union of the amazwe aseYurophu, esaziwa yonke izibopho ezibekwe umthetho lo EEC (-European Economic Community) yasungulwa ngo-1979. Kufanele uchaze bonke abaqalayo, lokho silinganiso lwemali ukuthengiselana, uyilondoloze a imikhawulo ngokuqinile kuchazwa, kanye ukugwema ngeziphambeko mutual emakethe ngokulinganisa ngamaphesenti imingcele bavumelana. Lokhu kusebenza cishe zonke izinhlobo zemali izwe elalaziwa. Ngokwesibonelo, ngakho-kuqashelwe ruble silinganiso kuya dollar noma iphawundi ngokumelene euro.
Kufanele kuqashelwe ukuthi inani eliphelele izici nomthelela silinganiso lwemali bengase bazikhandlele amashumi amaningana. Bonke bangabangasokile ezingokwengqondo, sakhiwo, kwezomnotho, zomthetho noma imvelo zezombusazwe. Into ebaluleke kakhulu kubo: umthetho kahulumeni, zenzalo, isimo engenayo kazwelonke kanye ibhalansi ukuhweba, izinga elindelekile yokukhuphuka kwamanani emali kanye supply imali nokubaluleka kwalo. Kuzo zonke izimo, le eyisisekelo the GNP (okwedlulele umkhiqizo kazwelonke) -United iqhaza in exchange of wenziwa emhlabeni wonke.
Umbuzo ka uyini ukubekwa lwemali ukuthengiselana, Namanje kubhekwe ukuba ngempela ezithakazelisayo futhi evulekile, ngakho naphezu kweqiniso lokuthi izinguquko zesimanje kulokhu baye kwenziwe eminyakeni engaphezu kuka amathathu edlule, ibhalansi ngokwayo iyagcinwa kuze kube yilolu suku. Nakuba kosongo obumbi olwalungaphoqelela base uhlaziye esikhathini esizayo esiseduze.